Barcelona oo xiiseyneysa xiddig ka tirsan kooxda Man City, mana ahan Eric García – Gool FM
Barcelona oo xiiseyneysa xiddig ka tirsan kooxda Man City, mana ahan Eric García
(Barcelona) 27 Sebt 2020. Ma ahan wax qarsoodi ah in Barcelona ay raadineyso inay la soo saxiixato daafaca kooxda Manchester City ee Eric García.
Laakiin waxaa layaab leh in Blaugrana ay ku jirto qorsho ay ku heleyso ciyaaryahan kale oo ka tirsan kooxda reer England ee Manchester City inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Intii lagu guda jiray wadahadaladii u dhaxeeyay Barcelona iyo Manchester City ee ku saabsanaa adeega Eric García, Blaugrana ayaa banaanka soo dhigtay xiisaha ay u qabto xiddig kale ee ka tirsan Sky Blue, kaas oo ah laacibka reer Ukraine ee Oleksandr Zinchenko.
Saxafiga Gianluigi Longari ayaa shaaca kaga qaaday boggiisa rasmiga ah ee “Twitter-ka”, sida uu warinayo wargeyska “Le 10 Sport”, Barcelona ayaa waxay sidoo kale kala hadli doontaa maamulka Manchester City, suurtagalnimada ay ku heli karaan adeega Oleksandr Zinchenko, waliba qaab amaah ah.
Oleksandr Zinchenko ayaa dooqa labaad u ah tababare Pep Guardiola kaddib Benjamin Mendy, sidaas darteed Barcelona ayaa adeegiisa u dooneysa si uu u caawiyo daafaca 31 jirka ah ee reer Spain Jordi Alba, si uu u helo fursad uu ku nasto inta lagu gudi jiro xilli ciyaareedkan
Guardiola oo shaaca ka qaaday mudada uu garoomada ka maqnaanayo Gabriel Jesus
Inter oo fasaxeysa labo ka mid ah xiddigaheeda si ay u dhameystirto heshiiska N'Golo Kanté